Gaa Oslo, ihe ị ga-eme ma mee n'isi obodo Norway II | Akụkọ Njem
Anyị na-aga n'ihu taa na echiche maka ileta Oslo, isi obodo Norway. Maraworị nnukwu Vigeland Park, Viking Ship Museum a ma ama ma ọ bụ ebe nchekwa Akershus, mana njem gị na-efu ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na e nwere ihe a pụrụ ịhụ n’obodo a, ọ bụ ihe ngosi nka na-adọrọ mmasị, ebe ọ bụ obodo ọdịbendị, mana enwekwara oge iji nwee obere egwuregwu na ihu ala.
Oslo karịrị ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na akụkọ ntolite, yabụ anyị ga-enye gị ọtụtụ echiche ndị ọzọ maka mezue ndepụta nke njem ahụ. Echefukwala inweta Oslo Pass iji nwee ọmarịcha azụmahịa mgbe a bịara n'ịhụ nlegharị anya na obodo.
1 Obí eze
2 Lolọ Oslo Opera
3 Ramlọ ihe nkiri Fram
4 Ihe ngosi ndi mmadu nke ndi Norwegian
6 Oslo Fjord n'ụgbọ mmiri
7 National Gallery nke Norway
Nke a bụ ukara obibi nke ndi eze norway na oslo. Obí ahụ malitere na narị afọ nke 13.30 na mgbanwe nke ndị nche na-ewere ọnọdụ na XNUMX pm. Enwere ike ịme njem nlegharị anya nke ime ya, mana ọ bụrụ naanị na anyị si na njedebe nke June ruo etiti nke August, nke bụ mgbe a na-ahapụ ha. N'ime ụlọ eze ahụ, enwere ụlọ ekpere na ọmarịcha ụlọ ịgba egwu. Otu n'ime ebe ndị ama ama n'ime Obí bụ Sala de los Pajaros, nke akpọrọ aha ya n'ihi na o nwere ihe osise ụmụ nnụnụ na mgbidi ya. Taa, ọ bụ ebe ọrụ karịa otu obí eze ji mee ebe obibi, ọ bụ ezie na ọ ka dị n'ihu ọha. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịhụ ya n'ime, anyị nwere ike ịmasị ọmarịcha ụlọ site na mpụga.
Lolọ Oslo Opera
Oslo Opera House bu otu n’ime ebe akacha ese foto ya ka o kwesiri ije ya ụsọ mmiri nke fjord. Ọ bụ ebe dị nnọọ mbụ, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ije n'elu ụlọ opera ahụ iji rute mpaghara elu ahụ wee nwee ọ enjoyụ site na ebe ahụ. Ọ bụ ezie na anyị anaghị abanye opera, nke bụ eziokwu bụ na nleta ahụ kwesịrị ya iji hụ fjord, zuo ike na mbara elu ma ọ bụ jee ije n'elu ụlọ opera ahụ. Ọ bụ ụlọ na-agba ume ka gị na ndị na-aga eleta ya na-emekọrịta ihe. N'ime ya nwere ọkwa atọ dị iche iche na ihe karịrị otu puku ụlọ dị iche iche. Nke kachasị mma, enwerekwa ọrụ na kọntaktị n'èzí, iji nwee ọ surfaceụ nnukwu mpaghara ahụ n'èzí.
Ramlọ ihe nkiri Fram
Onye kachasị ihe ga-achọ ịhụ nnukwu Fram Museum, Fram bụ ụgbọ mmiri na-eguzogide ọgwụ, nke mere ọtụtụ pola njem, otu na Roald Amudsen. N’ime ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie ka ụgbọ mmiri ahụ na ihe ndị o buru n’ime ya gachara. Ndị ọbịa nwere ike ịbanye n’ụgbọ ahụ wee hụ nkọwa niile, iji mata ka ha si ebi ndụ n’ụgbọ a. Na mgbakwunye, gburugburu nnukwu ụgbọ mmiri enwere ike ịhụ ngosi na akụkọ ihe mere eme nke njem polar. Taa, ọ ga-ekwe omume ịzụta ụfọdụ tiketi jikọtara ọnụ maka ụlọ ngosi ihe mgbe ochie dị iche iche. N'okwu a enwere tiketi maka Museum-Kiti Museum, na Norwegian Maritime Museum na Fram Museum.
Ihe ngosi ndi mmadu nke ndi Norwegian
The Norwegian Folk Museum bụ n'ezie mbụ ebe, nke onye ọ bụla na-enwekarị mmasị. Ọ bụ na-emeghe ikuku na-ngosi nka, nke nwere 155lọ XNUMX dị iche iche edepụtagoro si n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ. O kwere omume ịhụ ụdị ndụ niile n'oge dị iche iche na ụlọ nke ụdị dị iche iche. N'oge ọkọchị enwere ọrụ dị iche iche maka ụmụaka, dịka ịme nka ma ọ bụ ihe ụtọ dị iche iche, na ekeresimesi enwere ahịa mara mma.
Holmenkollen dị na mpụga Oslo, ọ bụghị naanị ụlọ elu trampoline dị ịtụnanya maka ịwụ elu, kamakwa a ihe ngosi nka skai. Ọ bụrụ na egwuregwu a na-amasị gị, ị nwere ike ịhụ akụkọ ihe mere eme nke ịgba ọsọ na ihe ngosi nka. Enwekwara ihe eji eme ihe ọchị nke ị nwere ike ịnweta ihe ịwụli dị ka ya. E nwekwara ụlọ ahịa ihe onyinye na otu kafe iji zuru ike.
Oslo Fjord n'ụgbọ mmiri
Otu n'ime ebe kachasị mma anyị nwere n'obodo a bụ ịnụ ụtọ fjord ya. Were ụgbọ mmiri njem site na oslo fjords Ọ bụ ahụmịhe nke anyị ekwesịghị ịhapụ. A na-eme ụgbọ mmiri nke ihe ruru awa abụọ site na fjords, iji lee osimiri ahụ site na obodo ahụ. Enwere ọtụtụ onyinye na nke a, site na obere ụgbọ mmiri ruo ụgbọ mmiri mara mma, dabere na ihe anyị chọrọ. Mana ọ bụ n'ezie ihe anyị ga-emerịrị ozugbo anyị rutere Oslo.
National Gallery nke Norway
Ihe osise a na Oslo bụ ihe kwesịrị ịhụ maka ndị hụrụ nka n'anya. O nwere nnukwu ihe osise nke Nordic, Norwegian na nka mba ụwa site na mbido narị afọ nke XNUMX ruo taa. Ọ bụ ezie na obodo ahụ nwere Munch Museum, eziokwu bụ na ọrụ kachasị ama nke onye na-ese ihe, 'Mkpu', dị na National Gallery.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gaa Oslo, ihe ị ga-eme ma mee n'isi obodo Norway II
5 obí a na-agaghị echefu echefu na St. Petersburg